နိူင်ငံရေး မလုပ်တာက ၅၀၅-ကကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပြီး၊ ဒူးရင်သီးရောင်းရတာက ဘလာ…ဘလာ…ဘလာ ဆိုပီး ရှင်းပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် ခင်ပွန်း – Shwe Likes
နိူင်ငံရေး မလုပ်တာက ၅၀၅-ကကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပြီး၊ ဒူးရင်သီးရောင်းရတာက ဘလာ…ဘလာ…ဘလာ ဆိုပီး ရှင်းပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် ခင်ပွန်း
နိုင် ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးေ ချာနန္ဒာလှို င်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ် ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံေ ကျာ်အနုပညာ ရှင်တစ်ဦး ပါ။ သူမ သရုပ်ဆောင်ရိုက် ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကား များစွာရှိတာေ ကြာင့် သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ် အခိုင် အမာရရှိထား သူပါ။ေ အာင်မြင်မှု များစွာရရှိပိုင်ဆို င်ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင်သူ မချစ်တဲ့မိသား စုလေးနဲ့ ဘဝကိုအေး ချမ်းစွာဖြတ်သ န်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူးရင်သီးရောင်းရတာက ဘလာ…ဘလာ…ဘလာ ဆိုပီး ရှင်းပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် ခင်ပွန်း
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီနန္ဒာ လှိုင်ကအိမ်ထောင်ပြုပြီးေ နာက်ပိုင်းမှာအနု ပညာအလုပ်ေ တွမလုပ်တော့ပေမ ယ့်ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကေ တာ့ ခုအချိန်ထိအားပေးဆဲပါ။ နန္ဒာလှိုင်ကတို့ မိသားစုလေးကပရိသ တ်တွေအားကျချစ်ခင် ရတဲ့မိသား စုဖြစ်သ လိုချစ်စရာေ ကာင်းတဲ့သ မီးလေးတွေက လည်းပ ရိသတ်တွေရဲ့အချစ် ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြ တာပါ။ မိသားစုရဲ့ပုံရိပ်ကေ လးတွေကိုလည်းချ စ်တဲ့ပရိသတ်တွေအ တွက်ဖော်ပြပေးေ လ့ရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်င န်းတွေကလည်းအေ တာ်လေးကို အခြေအနေေ ကာင်းနေပြီးအြ ခားလုပ်ငန်းတွေ ကိုပါ ချဲ့ထွင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ တာပါနော်။ အနေအေးပြီး တည်ငြိမ်သူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အားလုံးရဲ့ ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်းတွေကို ခံနေရပါပြီနော်။
နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ယောကျာ်း ဇေသီဟက လည်း နေရာတိုင်း ရောင်းဝယ်နေကြပြီး ကိုယ့်နေရာလေး ကွက်ပြီး ဒူးရင်းသီး မရောင်းရ နယ်မြေဖြစ်နေတာမ သိလိုက်ဘူး ဆိုပြီး ခနဲ့တဲ့ စာသားတွေ တင်နေတာ ပါနော်။ ဝိုင်းဆဲတဲ့ သူတွေကိုလည်း block ပစ်ပြီး ဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ comment ပိတ်ထား တာပါနော်။ တော်လှန်ရေး ဝင်မပါတဲ့ အကြောင်းက လည်း၅၀၅(က) ကို ကြောက်တယ်လို့လ ည်း ဆိုထားပါသေးတယ်နော်။
သူတို့ကို အပြစ်ပြောနေတဲ့ အကြော င်းရင်းကလည်း ပြည်သူချစ် အနုပညာ ရှင်ဖြစ်တာကြောင့် Speak out လုပ်စေချင်ကြ တာပါနော်။ သုံးလလောက် အသံမထွက်ဘဲ ပျောက်နေပြီး ဒူးရင်းသီးရာသီေ ရာက်မှ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ထွက်ပြီး ဈေးရောင်းတဲ့အတွက် ပိုပြီးဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.
နိုင္ ငံေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေ ခ်ာနႏၵာလွို င္ဟာဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြခ်စ္ ခင္အားေပးရတဲ့ နိုင္ငံေ က်ာ္အႏုပညာ ရွင္တစ္ဦး ပါ။ သူမ သ႐ုပ္ေဆာင္ရိုက္ ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ္ကား မ်ားစြာရွိတာေ ၾကာင့္ သူမကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ အခိုင္ အမာရရွိထား သူပါ။ေ အာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာရရွိပိုင္ဆို င္ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင္သူ မခ်စ္တဲ့မိသား စုေလးနဲ႕ ဘဝကိုေအး ခ်မ္းစြာျဖတ္သ န္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီနႏၵာ လွိုင္ကအိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေ နာက္ပိုင္းမွာအႏု ပညာအလုပ္ေ တြမလုပ္ေတာ့ေပမ ယ့္ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေ တာ့ ခုအခ်ိန္ထိအားေပးဆဲပါ။ နႏၵာလွိုင္ကတို႔ မိသားစုေလးကပရိသ တ္ေတြအားက်ခ်စ္ခင္ ရတဲ့မိသား စုျဖစ္သ လိုခ်စ္စရာေ ကာင္းတဲ့သ မီးေလးေတြက လည္းပ ရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾက တာပါ။ မိသားစုရဲ႕ပုံရိပ္ကေ လးေတြကိုလည္းခ် စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြအ တြက္ေဖာ္ျပေပးေ လ့ရွိပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္င န္းေတြကလည္းအေ တာ္ေလးကို အေျခအေနေ ကာင္းေနၿပီးအျ ခားလုပ္ငန္းေတြ ကိုပါ ခ်ဲ့ထြင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေန တာပါေနာ္။ အေနေအးၿပီး တည္ၿငိမ္သူျဖစ္လို႔ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ အားလုံးရဲ႕ ေဝဖန္ရႈံ႕ခ်ျခင္းေတြကို ခံေနရပါၿပီေနာ္။
နႏၵာလွိုင္ရဲ႕ ေယာက်ာ္း ေဇသီဟက လည္း ေနရာတိုင္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကၿပီး ကိုယ့္ေနရာေလး ကြက္ၿပီး ဒူးရင္းသီး မေရာင္းရ နယ္ေျမျဖစ္ေနတာမ သိလိုက္ဘူး ဆိုၿပီး ခနဲ႕တဲ့ စာသားေတြ တင္ေနတာ ပါေနာ္။ ဝိုင္းဆဲတဲ့ သူေတြကိုလည္း block ပစ္ၿပီး ဒီေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ comment ပိတ္ထား တာပါေနာ္။ ေတာ္လွန္ေရး ဝင္မပါတဲ့ အေၾကာင္းက လည္း၅၀၅(က) ကို ေၾကာက္တယ္လို႔လ ည္း ဆိုထားပါေသးတယ္ေနာ္။
သူတို႔ကို အျပစ္ေျပာေနတဲ့ အေၾကာ င္းရင္းကလည္း ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာ ရွင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ Speak out လုပ္ေစခ်င္ၾက တာပါေနာ္။ သုံးလေလာက္ အသံမထြက္ဘဲ ေပ်ာက္ေနၿပီး ဒူးရင္းသီးရာသီေ ရာက္မွ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚထြက္ၿပီး ေဈးေရာင္းတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္.
စိန်ထည် ပစ္စည်းတွေ လတ်တလော Live ရောင်းချဖို့ လက်မခံဖြစ်သေးတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ဖွင့်ဟ ပြောပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
လုပ်ငန်းရှ င်တွေရော အခက် ခဲဖြစ်နေတဲ့ ကလေးမိ ခင်တွေအတွ က်ပါ အဆင်ပြေမ ယ့်နည်းလမ်းနဲ့ အလှူလုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း